Ururka Carabta ee Xaquuqda Aadanaha - Containing Death Penalty
Ururka Carabta ee Xaquuqda Aadanaha, the Arab Organization for Human Rights (AOHR) waxaa la aasaasay sanadii 1983, ujeeda ururka waxaa ay tahay horumarinta iyo ixtiraamka, ilaalinta xuququl isnaanka dhamaan dalaka carabta, iyo in la ilaaliyo xuquuqda, sharafta, xoriyada, cadaalada, ka hortagida dhamaan noocyada takoorka iyo xadgudubka. AOHR waxaa uu leeyahay taariiq ku aadan ka soo shaqeynta xuquuqda aadanaha iyo ururdada dalalkaas. AOHR waxaa u ka shaqeyaa in kabadan 16 dal oo Carab ah waxaa na ka mid ah 47 dalka xunbo ka tarsan. Waxaa sido kale ururka uu ka qeyb qaatay dhismaha ururka Arab Institute for Human Rights (AIHR) ee dalka Tuuniisiya ilaa iyo sanadii 1989.
AOHR waxaa uu leesahay status ka wada tashiga ee UN-ECOSOC ilaa iyo sanadii 1989, iyo status ka xirirka ilaa iyo 2003, statuska kormeeka ee midowga Africa ilaa iyo 1990 iyo status ka kormeerka jaamacada carabta 1999. Waxaa oo kale ay ka qeybgaleen sameenta ururka Bar of Association of the International Criminal Court (ICC).
sida ururada caalamiga ah oo kale waxaa AOHR waxaa ay fadhigoodatahay dalka Masar Caasimadeeda Qaahira sidii ay heshiis ula saxiixdeen dowlada dalka Masar sanadii 2000. AOHR waxaa lagu saqanaa qibradoona dheer oo ay u leeyihiin dalalka Carabta, gaar ahaan sida ay ugu ololeeyaan, ilaalinta, baaritaanka, helida xaqiiqada, uruurinta warbixinta, iyo faragalinta.
Ilaa iyo mudadii 1993, AOHR waxaa sido kale ay ka qeybqaadatay si caalmi ah si wada jir ah UN, sidii loo horumarin lahaa si casri ah xuquuqul insaankaka.